Akhriso Liiska Wasiirada iyo Wasiir ku xigeenada ay saameyn doonto Iskushaandheynta Xukuumadda xasan cali kheyre | Saadaal Media
Akhriso Liiska Wasiirada iyo Wasiir ku xigeenada ay saameyn doonto Iskushaandheynta Xukuumadda xasan cali kheyre
In la bedelo Wasiirada uu khilaafka dhinaca shaqada ah kala dhexeeyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
In Wasiirada ku guul-dareystay in ay taageero siyaasadeed ka helaan xildhibanaada Beeshooda ay ku bixi doonaan isku shaandheynta Golaha Wasiirada.
In shaxda cusub ay ka tarjunto is faham ay gaareen Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe Sep 2017; si gaar ah maamulada Puntland iyo Koofur Galbeed) oo si weyn u suluugsan Xubnaha ku metela dowlada dhexe.
In Looga hortago Mooshin la filan karo xiliga ay fasaxa ka soo noqdaan xildhibaanada BFS bartamaha Bisha February 2018.
Ma jiro doonaan xubno ka mid ah mucaaradka muuqda ee dowladda.
Ma jiri doonaan wax isbedel ah oo lagu samayn doono Wasiirada ka soo jeeda beelaha Hawiye marka laga reebo Wasiirka wasaaradda Caafimaadka.